Odayaal dhaqameed reer Hargaysa ah oo ka qayladhaamiyay in ganacsade Jabuuti kasoo baxsaday dalkaasi loo gacan geliyo | Hadalsame Media
Home Wararka Odayaal dhaqameed reer Hargaysa ah oo ka qayladhaamiyay in ganacsade Jabuuti kasoo...
Odayaal dhaqameed reer Hargaysa ah oo ka qayladhaamiyay in ganacsade Jabuuti kasoo baxsaday dalkaasi loo gacan geliyo
(Hargaysa) 03 Abriil 2019 – Odayaal dhaqameedyo reer Hargaysa ah ayaa Somaliland uga digey inay Jabuuti u gacan geliso ganacsade caan oo ku sugan halkaasi.
Ahmed Osman Geelle, oo ah ganacsade reer Djibouti ah, ayaa iminka ku nool Hargaysa in ka badan hal sano, kaddib markii uu kasoo cararay dalka yar ee Djibouti.
Ganacsadahan ayaa mucaarad aad u dhaliila ku ah MW dalkaasi, Ismaaciil Cumar Geelle, oo uu iminka nidaamkiisu kali talis isu rigey uu sida la yiri ku eedeeyay inuu yahay ”khaa’inul waddan iyo cadowga dalka”.
Sidaa darteed, oday dhaqameedyo shir jaraa’id ku qabtay Hargaysa ayaa MW Somaliland, Muuse Biixi Cabdi u sheegay in aanu marna ninkaa ku wareejin dowladda Djibouti.
Qayldhaanta oday dhaqameedyadan oo uu u horreeyo Suldaan Maxamed Faarax ayaa yimi kaddib markii ay Wasaaradda Cadaaladda ee Somaliland soo saartay barwo lagusoo xirayo ganacsadaha.
Md Biixii oo haysta baasaboorka Jabuuti ayaa lagu tuhunsan yahay inuu wax la wado Geelle.
Previous articleSIRTA QARSOON: Maxay tahay sababta ay Sucuudiga, Turkiga, Qadar iyo Imaaraadku ugu dagaalsan yihiin Somalia?
Next articleQM oo Somalia u qoondaysay malaayiin doollar oo gargaar ah (Gobollada ugu badan ee gargaarka u baahan)